शैली, छवि | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: शैली, छवि
कसरी एक सुन लटकन सफा गर्न - ways तरीका
प्रकाशित 03.10.2019 03.10.2019
सुन एक सुन्दर, महँगो धातु हो, तर समयको साथ यसले यसको मूल चमक र चमक पनि गुमाउन सक्छ। सुनका गहनाहरू - पेंडन्टहरू र पेंडन्टहरू - फोहोर र कलंकित हुन्छन्, चिल्लो कोटिंगले ढाकिन्छ। उनीहरु…
कसरी जीन्सबाट पेन्ट हटाउने: चरण step चरण निर्देशनहरू
प्रकाशित 15.09.2019 22.10.2019
रंगमा उनीहरूको मनपर्ने प्यान्ट माटोमा राखेर, धेरैलाई गल्तीले विश्वास गर्दछ कि तपाईं तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा फाल्न सक्नुहुन्छ। सब भन्दा निराश व्यक्तिहरू बाहिरबाट शॉर्टहरू बनाउने निर्णय गर्दछन्, यदि ठाउँको उचाइले यसलाई अनुमति दिन्छ भने। तर, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो पनि हो ...
बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि बॉलरूम जुत्ता: आकारहरू, कसरी छनौट गर्ने
सहि नृत्य जुत्ताहरू छनौट गर्नुको महत्त्वलाई बढावा दिन सकिदैन। मानिसहरू जो पेशेवर नृत्य गर्छन् यसलाई राम्ररी बुझ्दछन्। प्रभुत्व प्राप्त गर्न, उनीहरूले आफ्नो समयको महत्त्वपूर्ण अंश प्रशिक्षणमा खर्च गर्नुपर्दछ। र यदि पूर्णता ...
निलो महिला शर्ट - एक अपरिहार्य वार्डरोब आईटम
अचम्मको कुरा, तर महिला धेरै सुन्दर र पुरुषहरूको लुगामा आकर्षक देखिन्छन्। अवश्य पनि, हामी विपरीत लि of्गको अलमारीको सबै तत्वहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छैनौं, तर ना naked्गो शरीर वा टक्सिडोको बारेमा ...
लोलिता शैली: वर्णन, आउटफिटहरू
प्रकाशित 15.09.2019 24.10.2019
लोलिता शैली the० को दशकको एक मूल आविष्कार हो जुन धेरै दशकहरूमा लोकप्रिय छ। जापान यस फैशनेबल चलनको जन्मस्थल मानिन्छ, जसले रोकोको र बारोकका केही सुविधाहरू समाहित गरेको छ, र उही नाममा ...
शुद्ध सुन भनेको के हो? गुण, संरचना, परीक्षण र शुद्ध सुनको प्रति ग्राम मूल्य
प्रकाशित 15.09.2019 07.12.2019
व्यक्तिहरूले सँधै आफ्नो शरीरहरू विभिन्न सामानहरूसँग सजाउन मन पराउँछन्। यदि धेरै वर्ष अघि, मोती, चेन, ब्रेसलेट, औंठी र झुम्का मुख्यतया धार्मिक ताबीज र तावीजको रूपमा लगाइएको थियो भने, तब ...
ब्लाउज - बडिसाइट "ग्रेसफुल सिल्हूट" ("एभन") - ग्राहकहरूको समीक्षा र जसले यो ब्लाउज लगाउँदछन्।
प्रकाशित 15.09.2019 25.10.2019
एउटा साधारण ब्लाउज जीन्स, ट्राउजर, वा स्कर्टमा राम्रोसँग फिट हुँदैन। "बुलबुले" कम्मरमा देखा पर्दछन्, जुनसँग व्यवहार गर्न गाह्रो छ, किनकि तपाइँले तिनीहरूलाई निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्छ। यस्तो ब्लाउजको स्वामिनी नर्वस र नियमित हुन्छ ...
युनिसेक्स - यो के हो? युनिसेक्स शैली लुगा, सुगन्ध वा जुत्तामा कसरी देखा पर्दछ?
आधुनिक संसारमा धेरै फरक अवधारणाहरू छन्; केहि अनावश्यक रूपमा हराउँछन्, अरूहरू उठ्छन्। यो लेख उनीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ जसले युनिसेक्स जस्तो शब्द बुझ्न चाहन्छ: यो के हो र ...
Anorak नाइके सधैं एक फैशन प्रवृत्ति हुनेछ
फेसनमा, खेलकुदका तत्त्वहरूले प्राय: पहिलो स्थान ओगट्छन्। लाइट ज्याकेट वा विन्डब्रेकरहरू धेरै वर्षको लागि क्रममा सबै भन्दा राम्रो स्थानमा छन्। नाइके अनोरक त्यहाँ चाँडै र तुरून्त प्रवेश गरे ...
भोलोटिक (शुक्र को पत्थर को कपाल)। तस्वीरहरू, गुणहरू र मूल्य
क्वार्ट्ज सब भन्दा प्रसिद्ध अर्ध-बहुमूल्य पत्थर हो। यसको लोकप्रियता यसको सौंदर्यशास्त्र र खनिजको सट्टामा कम लागतका कारण हो। क्वार्ट्जको सब भन्दा चाखलाग्दो प्रजातिहरूमध्ये एउटा कपाल हो, कपालको काव्य नामको ढु a्गा ...
शैली रहस्य: एक बेरेट कसरी लगाउने
"बेरेट" शब्द अनजानमा रमाईलो फ्रान्सेली महिलाहरूको छविको साथ जोडिएको छ उनीहरूको कपालमा एक उत्तम हेड्रेस। आधुनिक फेसनमा, यो पेरिसियन आकर्षणको मूर्त रूप हो, स्त्रीत्व र परिष्कारको प्रतीक। र यदि फ्रान्सेली महिलाहरू भित्र छन् ...
लामो पर्खावा भनेको के हो र यसलाई लगाउने के हो?
जो एक लामो आस्तीन के हो थाहा छैन जो धेरै गुमाए। सबै पछि, यो चीज एक धेरै सुविधाजनक हो। यो लामो बाहिरी टि-शर्ट हो जुन धेरै राम्रा र नरम बाट बनेको छ ...
फ्लास्कमा गुलाब - नयाँ प्रवृत्ति सदाको लागि गुलाब
फूलहरू पहिलो चीज हुन्छ जुन दिमागमा आउँछ जब कुनै पुरुषले महिलालाई जित्न खोज्छ। स्नेह, मोह, प्रगाढ प्रेम र उत्कटताको प्रतीक, तिनीहरू भावनाहरूको पुष्टि हो र खुशीको इच्छाको मूर्त रूप हो। मा गुलाब ...
"Balenciaga" (परफ्यूम): सुगन्ध, निर्माता र समीक्षा को विवरण
बालेन्सियागा अत्तर हो जुन एक पटक उही नामको फेसन घरको लागि आम्दानीको एक मात्र स्रोत थियो। क्रिस्टोबल बालेन्सियागा एक प्रतिभाशाली couturier थियो जसले उत्कृष्ट कपडा र प्रस्तुत योग्य सामानहरू सिर्जना गरे। यस ब्रान्डको ब्यागहरू लोकप्रिय छन् ...
लुगामा खाकी कुन रंगको साथ जान्छ?
हालै, "सैन्य" शैली, जुन खाकी र color्ग योजनासँग दृढ रूपमा सम्बन्धित छ, फेरि फेसनमा फर्कियो। यो सोच्न गल्ती छ कि तथाकथित "सैन्य" र colorsहरू विशेष विशेषता र उज्यालो युवा महिलाहरूको लागि उपयुक्त छन्। किनभने ...
यताटरिनबर्गमा एक डाउन जैकेट किन्न छनौट गर्ने
जाडोको लागि एक पटक डाउन ज्याकेट किन्न पर्याप्त छ, किनकि तपाईं यस प्रकारको कपडाको पालना बन्नुहुन्छ। रूसीहरू उनीहरूको लाइटनेस र उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन गुणहरूको लागि गम्भीर चिसो मौसमबाट यी तातो डाईनी उद्धारकर्ताहरूको साथ प्रेममा डुबे। लामो समय को लागी डाउन जैकेट ...
Candice Swanepoel: फिगरको प्यारामिटर, मेकअपको subtleties र मोडेलको व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
फेसन विश्व एक दिन एक अरब डलर उद्योग हो। पत्रिकाहरूको लागि शूटिंग, नयाँ संग्रहहरू देखाउँदै, नयाँ प्रवृत्ति विकास गर्दै, फोटोग्राफरहरू फेला पार्दै र अन्य धेरै समस्याहरू चिन्ता डिजाइनरहरू, फेशन डिजाइनरहरू, सम्पादकहरू ...
कुन कम्पनीले स्नोमोबाइलको लागि हिउँदको लुगा किन्ने? स्नोमोबाइल शीतकालीन कपडा: ब्रान्ड रेटिंग
हालसालै, यो घरको बाहिर उनीहरूको जाडोको फुर्सद सक्रिय रूपमा खर्च गर्न धेरै फेसनशील भएको छ। यदि पहिले हाम्रो देशका बासिन्दाहरूले जाडोको चिसोमा आरामदायी घर मन पराउँछन्, अब हरेक बर्ष ...
फर कारखाना "कल्याइभ": उत्पाद समीक्षा
फेसन परिवर्तनशील मुडको साथ एक स्वामिनी हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सुन्दर प्राकृतिक फर कोट जहिले पनि कुनै महिलाको अलमारीको आकर्षण हुन्छ। यो एक अधिक उत्तम पोशाक कल्पना गर्न अवास्तविक हो कि दुबै तनाव र तपाइँको मुड ...
कसरी पुरुषको शरद कोट लगाउने?
चिसो मौसम को आगमन संग, सुन्दर, न्यानो बाहिरी पोशाक को आवश्यकता पहिले कहिल्यै पहिले जस्तै महसुस गरीरहेको छ। दुबै महिला र पुरुषहरूको लागि उत्तम विकल्प कोट हो। यस वार्डरोब वस्तुलाई लामो समयका लागि छनौट गरिएको छ।
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 42 अर्को पाना
58 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,610 प्रश्नहरू।